JIREENYUMA! - Welcome to bilisummaa
bilisummaa September 16, 2014	Leave a comment
Takka gadoo takka oloo
Takka rakkoo takka balloo
Takka nagaa takka haaloo
Takka orraa takka hebaloo
Jireenyumaa tunis maaloo!
Kuun ni ciisa kuun ni mugaa
Kuun ni taa’aa kuun ni fiigaa
Kuun ni basha’a kuun ni baaraga
Kuun dheebotee kuun ni dhugaa
Jireenyuma kunis eegaa!
Kan facaase ni haammata
Kan dadhabe ni rakkata
Kan murate ni galfata
Kan hanqatte ni cinqata
Jireenyumaa akkam goota!
Kan beelawe ciniinnatee
Kan quufe deeqqifatee
Kan madeeyse irraanfatee
Kan illaaweef biluu taatee
Jireenyuma yoo hubatte!
Tokko bultiif alaan’alaa
Kuun galfatee wajjiin galaa
Tokko wallaale akka malaa
Kaaniif taatee if wallaalaa
Jireenyumaa maaltu fala!
Kan bolole ija hiraa
Kan baqate ala jiraa
Kan boqate way agarraa
Kan jiruutu waa agaraa
Jireenyumaa tunis baraa!
Garii qabeenya akkaan horee
Kanis yaanni mataa koree
Kan kadhate gooytaan furee
Kan hoongaawe ni hiraare
Jireenyuma kunis maarree!
Tokkoof koflaa kaaniif booyaa
Gariif calii kaaniif gooyaa
Tokkoof qilee kaaniif dooyaa
Asiin halkan achiin guyyaa
Jireenyuma tunis hayaa!
Asiin billiqaa achiin duumeessaa
Gariif birraa kaaniif badheessaa
Kaanis deegaa kuun dureessaa
Tokko gabraa kuun bilisaa
Tan jireenyaa tuni baasa!
Tokkoof baalaa tokkoof Gaalaa
Kuun amala kuunis haalaa
Gariif dhihoo kuun halaalaa
Tun hammaattus taantu tolaa
Jiraachumaat irra caala!
Wal hin simtu wal hin qadaaddu
Wal hin taatu walii hin yaadduu
Yoo ariites hin dhaqqabduu
Si qabnaanis harkaa hin badduu
Jireenyumaatti haa ramadu!
Jireenyi kun bar ajajaa
Jiraachuudhaaf bari hoojjaa
If hin jaamsin bani ijaa
Rabbiin arjaa namaa bajjaa
Jireenyumaa tanaan ejja!
Jireenyi kun namaan maraa
Obsa malee si mararaa
Jiraachumaa irra jiraa
Sa maal ta’uudhaaf hiraarraa…?
Tan jabaatteef Waaqaa jiraa!!
Previous Hawaasni Oromoo Magaalaa Stockholm Keessaatti Qophii Ayyaana Irreechaa fi Gargaarsa OMN Gaggeessan
Next Abbootiin Gadaa Oromoo hangam mootummaa Wayyaaneerraa walaba ta’anii hojjechaa jiru?